Ogologo oge ole ka nke a na-eme na Tour de France? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kedu ihe dị anya njegharị nke de France - ihe ngwọta bara uru
Kedu ihe dị anya njegharị nke de France - ihe ngwọta bara uru
Ogologo oge ole ka nke a na-eme na Tour de France?
Mbipụta nke oge a nkeTour de Francenwere 21 ụbọchị-ogologoagba (nkebi) N'ime oge 23 ma gbasaa gburugburu 3,500 kilomita (2,200 mi).
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Tour de France bụ ihe omume ịgba ígwè kachasị ukwuu nke oge ahụ, nke a na-eme na July. Na njem ahụ, ndị na-agba ịnyịnya kachasị mma n'ụwa na-asọ mpi iri abụọ na otu gafee France maka ọnụahịa kachasị na ịgba ịnyịnya ígwè, izu atọ nke ịgba ọsọ dị iche iche kwa ụbọchị na ọtụtụ agba agba dị iche iche siri ike idobe, yabụ anyị ga-agbaji ya. na ntuziaka onye mbido a na Tour de Frost Gịnị bụ njem ahụ? The Tour de France bụ otu n'ime atọ nnukwu igwe kwụ otu ebe njegharị na ọ bụ? agbụrụ kachasị ewu ewu na kalenda enweghị ajụjụ dịka onye nyere onyinye njem njegharị ahụ nwere 21 nkebi nke ọ bụla gbasara izu atọ ugbu a, usoro nke ọ bụla agbatịwo oge, onye ndu agbụrụ ahụ na onye mmeri zuru oke kpebisiri ike na a ga-atụgharị oge ngagharị ugbu a. na mgbakwunye na mkpokọta ogo dị ka nhazi ọkwa n'ozuzu ma ọ bụ gcas a na-akpọkarị ya dị ka onye mbụ gafere akara ngwụcha na ọkwa ọ bụla na-ekpu onye mmeri ahụ, njem a na-agụnye ụbọchị izu ike abụọ na-enweghị ịgba ọsọ, n'agbanyeghị na ndị na-agba ịnyịnya na-apụ ma mee apata ụkwụ iji mee ka ụkwụ ha na-agagharị, mana ha na-ewepụ ụbọchị ndị a iji hụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịgbake ka ha nwee ike ịgba ọsọ dị ka o kwere mee ụbọchị ndị na-abịanụ iji mee ka agbụrụ ahụ bụrụ nke na-atọ ụtọ dịka o kwere mee. Njegharị ahụ na-agba kemgbe 1903 na naanị nkwụsịtụ site na Agha Iwa Mbụ na II, na-eme ka agbụrụ 2020 107 malite na mba agbata obi dị ka Belgium, Netherlands, Great Britain na ebe ndị ọzọ, ugbu a agba nke mbụ nke agba ọsọ na-ewerekarị na mba ahụ, mana ha na-aga France maka mmalite a maara dị ka Grand Departall ya mere njem nke Tour de France dabara n'otu n'ime ụzọ ise dị iche iche na ọkwa mbụ nkebi ndị a nwere obere mmasị ma jiri ya gbaa ọsọ ahụ n'etiti ịkwaga ugwu dị iche iche gafee mpaghara French, ugbu a ndị ọkachamara anyị na-akpọ ndị na-agba ọsọ na-emeri ha, bụ ndị na-agba ọsọ ọsọ karịrị kilomita 70 kwa awa, mgbe ha na-agba ọsọ gaa na njedebe na ebe dị oke ọsọ, mgbe ahụ anyị nwere ugwu ugwu nkebi, ugbu a ugwu nke njem ahụ bụ ihe omume bụ isi na akụkụ nke agbụrụ ahụ, onye ọ bụla ga-achọ ịbụ akụkụ nke ndị na-ekiri ya na ndị agbụrụ ndị a na-agbasa usoro ndị a n'etiti ugwu alps na pyre nees na nkebi ndị a ugwu ọtụtụ puku mita nke ịrị n'ime izu atọ ị nwere ike ma ọ bụ na-ejedebe na nnukwu ugwu elu ugwu dị ka nzuko mbata ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe eriri ogologo gafere mgbe ị rịgoro nnukwu ọkwa ndị a na-atọ ụtọ mgbe niile ma ha na-abụkarị nnukwu mkpebi. ihe ndị dị na nyocha oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri njem njem nke France ị ga-abụ ezigbo oge ikpe a na-akpọ agbụrụ ahụ megide elekere, n'ihi na ọ bụ mgbalị mmadụ n'otu oge nke ọ bụla ọkwọ ụgbọala na obere oge nke nkeji n'otu oge, ndị na-agba ịnyịnya na-ejikarị ịnyịnya ígwè pụrụ iche na akụrụngwa aga ngwa ngwa dị ka o kwere mee n'ọsọ ha.
Oge ọnwụnwa nwere ike ime na mpaghara ọ bụla, site na egwu ndị dị larịị ruo na ugwu na ọbụna ugwu dị ọcha na-enye ohere dị ukwuu maka ọkwa zuru oke iji tinye oge dị ukwuu na ndị na-agba ya. A na-anwale ule oge otu n'otu usoro ahụ dị ka ọnwụnwa oge ọ bụla, mana ndị otu ahụ na-agba ha ugbu a otu ọ bụla na-apụ ma na-agbagharị na nhazi usoro, were ya na nnụnụ na-akwaga n'ụdị V a buru ibu, nke a na-enyere aka imebi ifufe ma debe ya ije ije dị elu dị ka ndị ọrụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee. Ugbu a ndị otu ahụ na-amalitekọ ọnụ na oge ikpeazụ enyere enyere bụ onye na-agba nke ise gafere agba ọsọ, mana ha na-ebukarị mmadụ asatọ agba.
Ya mere, mgbe ha nwere ndị ọkwọ ụgbọala asatọ gbadara atọ nke ahụ bụ ise, yabụ ha na-enwekarị ndị ọkwọ ụgbọala atọ na-eme ihe ha nwere ike. Anyị na-atụgharị Calla gburugburu ma na-ere ọkụ nke ọma, ha ga-aga nke miri emi ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịhapụ nso na njedebe, ịhapụ ndị ọzọ ka ha gaa na-enweghị ha, ndị na-agba ịnyịnya a na-agagharịkarị na nke ha iji chụọ otu ha Onye ndu, ugbu a, ikpe nke otu egwuregwu, ọ bụrụ na emee nke ọma, ọ dị ka igwe mmanụ nwere mmanụ nwere nnukwu uru karịa ndị ọzọ, na-agbaso ụdị mmemme a, onye mmeri niile nke Tour de France bụ otu onye na-agba ịnyịnya nke nwere obere oge. na njedebe nke 21, nke kwụsịrị na akara ngosi Champs-Elysees na Paris kemgbe 1975, nnukwu ìgwè ndị na-agba ịnyịnya nọ na njem a maara dị ka Peloton thepelotonis nwere ìgwè 22 nke ndị ọkwọ ụgbọala asatọ, nke nke ọ bụla rụpụtara na 176 ọkwọ ụgbọala na mmalite. Otu ọ bụla nwere ndị ịnyịnya kachasị mma nke mejupụtara onye bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè kwa afọ.
Ndi otu abuo a gunyere otu ndi Top Animal World Tour na ndi otu ndi otu aka nke nwere ugwo. Ndị otu Procontinental na-enwe ndị na-abata abata ma na-abịa dị ka ndị pere mpe, ọ bụ ezie na ndị otu Superbig nwere ohere dị mma maka ndị otu ahụ bụ ndị otu mpaghara iji gosipụta ndị na-akwado ha n'ọsọ kachasị nke oge ahụ, na-asọmpi Bigworld Tour Ndị otu egwuregwu nwere ike ịdọta ndị na - agụsị akwụkwọ ikike ga - achọ ịbanye ha maka njegharị ụwa na oge na - abịanụ ga - abụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na - eme ka agbụrụ ahụ dị na breakaways iji tinyekwuo uche na ndị na - akwado ha, dị ka o kwere mee, ugbu a ndị otu ga - na-elekwasị anya na otu ndị ọkwọ ụgbọala abụọ ma ọ bụ abụọ a họpụtara dị ka ndị isi otu ndị otu ga-achọ onye ọ bụla iji merie nkebi ma ọ bụ onye ndenye ọkwa zuru oke nke ebumnuche ya bụ iji merie Tour de France na Isi yana onye ndu ndị ọzọ so. nke ezinụlọ, nke pụtara n'ụzọ nkịtị, ndị ohu ugbu a, ndị nwe ụlọ ozugbo iji kwadoo ndị isi otu ha, ịchụ ohere nke ndu ha iji nyere ndị otu ahụ aka ha Toredomestiq ndị mmadụ na-agbakarị n'isi otu ahụ, iji belata ije ọgụ ọgụ belata nwayọ na-echebe onye ndu site na ifufe nnoo iji chekwaa ikike onye ndu ahụ na-echekwa ndị obodo ga-alaghachikwa n'ụgbọ ala otu ịnakọta nri iji nweta iwu iji nweta karama akwa maka ndị isi ha, ọ bụrụ na onye ndu gị nwere mgbapu n'akụkụ ụzọ ebe ụgbọ ala gị enweghị ike iru gị, nye gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe nke gị iji mee ka ị laghachi n'ọsọ ahụ ozugbo enwere ike ugbu a, n'oge ọkwa ọ bụla nwere naanị otu onye mmeri ma ọ bụ naanị otu onye ọkwọ ụgbọala meriri njegharị a na ngụkọta mmeri ndị a dị na tad ellose teamwork nke ndị otu egwuregwu asatọ niile, ọ dịghị onye nwere ike imeri njem njegharị France naanị na ọ gaghị ekwe omume nkwenye ndị ochie. na-eme ka nrọ ahụ nwee ihe ịga nke ọma na njem ahụ bụ ihe ngosi mara mma nke dị iche iche nke na-agbagharị site na France nke a ngwakọta nke uwe ndị na-eto eto nke ndị na-akwado nkwado -logos na-akpali akpali ụkpụrụ na agba agba bụ n'ezie a Lee n'okpuru niile regula Ndị uwe ojii nwere ike ịchọta ma ghọta uwe ha ugbu a. ou ga-ahụ uwe jikọtara anọ dị mkpa nke enyere onye isi nke otu ọkwa anọ dị iche iche na njedebe nke ọkwa ọ bụla Yellow jes Le Le Mayo Jean bụ isi na uwe kachasị ama. nke ndị na-agba ịnyịnya Tour de France nwere oge kachasị dị ala karịa oge, uwe ahụ nwere agba odo, ekele maka akwụkwọ akụkọ French Auto, nke mbụ kwalitere agbụrụ ahụ na mbido narị afọ nke 20 ọ bipụtara na akwụkwọ edo edo edoghị anya ugbu a onye ọ bụla na-eyi a jersey na njedebe nke ogbo 21 na-enweta Tour de France niile n'oge nkwanye ùgwù site n'aka ndị ọgbọ na ndị na-akwado ya ma jiri ego nrite nke 500,000 euro onye na-acha ọcha ọcha bụ Mile Block na-acha ọcha jersey na-egosi onye ọkwọ ụgbọala kachasị mma n'ọsọ ahụ. nke a Ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala kachasị mma na njirisi zuru ezu bụ nke mbụ nwere ike idobe ya na-acha odo odo n'okpuru Jenụwarị 25th na agbụrụ ịgba ọsọ na agba ọcha n'otu oge ahụ, m n okwu a ka edoziri ugbua na-acha odo odo, mgbe ahụ ebe nke abụọ maka ndị na-eto eto na-akwọ ụgbọala n'ozuzu ya ga-eyi akwa ọcha na njedebe nke njem ahụ onye ọkwọ ụgbọ ala kachasị mma na-ewe ụlọ 20,000 euro akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a na-akpọ Lumaio ver bụ onye na-agba ọsọ niile agbụrụ Ihe na-ọdịda nke mbụ ọkwọ ụgbọala ịgafe agbaru, Otú ọ dị, ndị dịnụ ihe na-ọdịda ụbọchị ọ bụla ihe ndị dị iche iche dabere na ụbọchị ogbo.
Na mgbakwunye na isi okwu ndị a, ụzọ nke ụbọchị ọ bụla dị spic kt nwere ihe a na-akpọ agbatị dị n'etiti nke na-abịa tupu akara, agbụrụ ahụ ka na-atọ ụtọ. Malite-imecha Sprint ihe na-ọdịda ihe ma na etiti sprints na na n'isi sprints na ọkwọ ụgbọala na ihe ndị kasị na njedebe nke agbụrụ na-eyi na-acha akwụkwọ ndụ jersey now Jersey -enwetakarị merie ma ọ bụ eyi site na onye na-agba ọsọ na-anakọta ihe mgbe ọ meriri Nzọụkwụ ma na-ejedebe mgbe niile n'elu 15 na nkebi ọ naghị emeri na nke ugwu dị elu na-alụ ọgụ maka ndị na-apụ apụ t na ị nwere ike ịchekwa sprints dị n'etiti ọbụna n'ụbọchị ebe ha na-enweghị ohere nke mmeri Ọnụahịa nke onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ puku iri abụọ na ise euro, dotted jersey la moi poirous, n'ụzọ yiri nke ahụ maka ndị enyi nke usoro nke etiti, na elu nke isi isi ọ bụla maka ndị na-agba ịnyịnya ole na ole iru n'elu, ọnụ ọgụgụ ndị dịnụ Ihe dị iche iche dabere na nhazi ọkwa nke nrịgoro nke siri ike karịa ugbu a, ọ dịkarịa ala ihe ndị ọzọ ka enyere ugbu a Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere isi ugwu kachasị elu na-eyi uwe na-enweghị ntụpọ ma were ya euro 25,000 n'ụlọ ya na njedebe nke njem ahụ. Ka anyị kwuo maka ndị na-agba ọsọ Sprinters na-achọkarị imeri ọkwa dị larịị na-echebe onwe ha site na ifufe n'azụ ndị otu egwuregwu ụbọchị niile na-anwa ịnọ n'akụkụ elu na-ezere nsogbu na-ezere mgbawa site na ngalaba teknụzụ na-ezere mgbanwe mgbanwe ikuku na-akụ ụdị ihe niile sprinters n'ụzọ nkịtị mana mgbe ha na-akwa ụta. emetụla ifufe aka mgbe ọ bụla, ha na-ezobe n'ihu peloton ruo narị mita ikpeazụ, ebe ha na-apụ n'azụ ndị otu ha nyere ha nnukwu ụzọ iji mebie mmeri ahụ ka ha wee nwee ike ịgbaru ihe mgbaru ọsọ ahụ Ọsọ ọsọ nwere ike ịmepụta ike dị ukwuu ọbụlagodi obere oge ma ị dị oke ọsọ Beingbụ onye na - agba ọsọ bụ ọrụ pụrụ iche ma dị egwu Ọkwọ ụgbọ ala ndị na - emeri sprints na - esiri ha ike ịlanarị ugwu dị elu You naghị anụkarị gbasara onye na - agba ọsọ na otu nkọwa ahụ na njedebe nke njegharị sprinter tendenzie ll awa n'azụ ndị mmeri niile n'ozuzu ha, n'agbanyeghị na ị nwere ike merie ọtụtụ nkebi na a na - emeri ndị ọkachamara na - arị ugwu na - agba ugwu ndị a na - arụ ọrụ na ịrịgo ma ha na - eme ngwa ngwa na - abụkarị ndị na - agba ịnyịnya na - achọ iji merie njegharị ahụ mana agbụrụ ahụ nwekwara ndị na - arị elu na - enweghị mmasị na agba odo. Ha nwere naanị otu ebumnuche, iji merie ndị mbata na ugwu.
Ugbu a, onye na-agba ịnyịnya chọrọ mmeri njem ahụ n'ozuzu ya nwere ike ịrị ugwu nke ọma, yana ikike nwere ike ịmepụta oke oghere na njikọ ahụ ma mee ka ndị asọmpi ha tufuo oge dị ukwuu n'ogologo. otu mgbe ọ bụla a nwalere oge ọnwụnwa dị mkpa kachasị mkpa na agbụrụ agba a ga-enwe opekata mpe otu oge kwa mbipụta nke njegharị a na France, mana ụfọdụ na-agbakwunye abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụ karịa karịa ndị isi otu egwuregwu na-emeri ọkwa niile m chọrọ. ga-enwerịrị ike iwepụta ezigbo oge ikpe oge ikpe oge na-ewe ebe ọ bụla site na 30 nkeji ruo elekere ma ndị na-agba ịnyịnya nwere ikike iji merie nkeji tupu ndị na-ama ha aka ma ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma na ya. nwere nnukwu uru karịa onye Agc na-asọ mpi bụ onye na-adabere n'ịgbago ngwa ngwa n'ugwu iji nweta oge ugbu a na mgbakwunye na oge ikpe na-enye oge ego oge maka ndị atọ na-agba ịnyịnya gafee agba ọsọ na-ewere isii d sekọnd anọ maka nke mbụ, nke abụọ na nke atọ ebe ndị nwanyị na-eme njem de France Closest bụ peloton ụmụ nwanyị Nnukwu njem izu atọ na-eme na Girorosa, agbụrụ ụbọchị iri nke na-amalitekarị na July yana Thelọ ọrụ na-ahazi njem nlegharị anya na-ahazikwa le tour defrancea nwanyị otu ụbọchị agbụrụ n, nke emere na otu ụzọ dị ka ogbo nke agbụrụ ndị nwoke ruo ọtụtụ afọ. Nke a bụ ụzọ dị larịị gburugburu champs-elyseesin paris nke ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-echekarị na anyị niile kwenyere na ezigbo ụmụ nwanyị-la tour de france ga-agbanwe ihu ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya igwe ruo mgbe ebighi ebi ma bụrụkwa nnukwu ụzọ iji Egwuregwu ziri ezi n'eziokwu na n'onwe m amaara m na ọ ga-abụ ihe dị ịtụnanya iji nwee ike ịhụ nke a wee bie ndụ dị mma enwere m ihie ụzọ nke kedu ka m si hụ nke a - ebe kachasị amasị anyị ịga leta ndị njem na-agba ọsọ gcn mana mana enwere ike anyi nwere ezi obi ma mana ewezuga njegharị anyi nwere otutu otutu agbụrụ ndi ozo n’aho nile ma gcn di ohuru? Race Pass nwere ihe niile ịchọrọ, ọ nwere ụdị atụmatụ niile dị ka profaịlụ ọkwa, ndepụta mmalite, ihe ngosi kwa ụbọchị mgbe nyocha agbụrụ na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ, ọ nwere ọtụtụ ihe ịchọrọ, ma ị bụ onye na-ekiri ekiri ma ọ bụ a oge mbụ fanatic a igwe kwụ otu ebe bụ na nke ahụ bụ ya tour de francethe nnukwu show isi ihe omume n'ụzọ nkịtị nnukwu ihe omume nke afọ na agba ụwa njegharị bụ oké mmalite ma ọ bụrụ na ị hụtụbeghị agbụrụ agbụrụ tupu ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye anyị ume ma ọ bụrụ na ị maara onye na-abanye ugbu a na ịgba ịnyịnya ígwè ma nwee ike ịchọ ịmata banyere agbụrụ ịgba ịnyịnya na njegharị. Zitere ha edemede a ka ha wee nwee ọ excitedụ, ekele maka ikiri na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ
Ugboro ole ka e nwere na Tour de France 2020?
Ego ole ka ndị na-agba ịnyịnya Tour de France na-agba n’ụbọchị?
Tour de France 2020/Nkeji edemede
Have nwetụla mgbe ị nọdụrụ n'ụlọ wee lelee Tour de France na kedu ka ndị na-agba ịnyịnya a si bilie ọsọ ọsọ? - Ekwenyesiri m ike. Ọ dabara nke ọma, anyị nwekwara obere ahụmịhe iji soro gị kerịta. - Ooh, ee, anyị na-eme. (egwu elektrọnik dị jụụ) - Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo dịka ewu ugwu Tour de France, ị ga-ebi ndụ kwa ụbọchị ọ bụla site na itinye uche gị n'isi.
Na-arị ugwu, ọsọ ọsọ.- Ee, ị ga-aza ajụjụ maka obere gị, ịnweghị ike ịnọdụ ala ma rapara na nnukwu mmanya chocolate na February dị ka anyị niile hụrụ n'anya ịme, wee chọọ ịrị elu ugwu ngwa ngwa Julaị. Echere m na ọ bụ onye na-agba ọsọ ruo n'ókè ụfọdụ, onye na-erughị? Ọ bụrụ n’ị lekwasị anya n’ịgba ugwu ọsọ ọsọ, ị nwere ike gbanahụ omume a.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa na Tour de France na July, ị ga-ahụ maka ọ bụla ọnyà ọ bụla si n'ọnụ gị pụta. Otu ihe ahụ na-emekwa maka ihe ọ bụla i mere, kwa. Omume ọ bụla nwere mmetụta na-agwakọta na ahụ mmadụ.
Dị ka ihe atụ, were ya na ị nọ n’okpukpu nke atọ nke otu ụlọ ma na-agbago ma na-agbada ma ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n’ụbọchị. Nke ahụ bụ usoro 28,800 tupu ị mee njem Tour de France. Yabụ ọ ga-aka mma iji igwe mbugo ahụ mgbe ụgbọ elu awa asaa ahụ siri ike gasịrị? a Tour de France ọkachamara.
N'ikwu okwu banyere nri, enwere m onye otu egwuregwu m riri naanị oat na mmiri ruo izu abụọ tupu agba agbụrụ ukwu. Ahụ adịchaghị ike ịnweta ụdị nri amachibidoro, mana ọ mere ngwa ngwa ngwa ngwa. - Otis na mmiri? - Ee, iwe. - undsda jọgburu onwe ya.
Mgbe mụ na Chris na-arịgo Col Madeleine, ọ na-arịgo. Yabụ na ọ nwere ike ịbụ ezigbo oge ịgwa gị ntakịrị gbasara ọzụzụ elu. Ọzụzụ dị elu toro na ewu ewu na nso nso a Tour-Proshave anwalela ụdị ụfọdụ nke ogige dị elu, ma ọ bụ ọzụzụ dị elu, n'oge ụfọdụ n'oge ọrụ ha. - Ugbu a okwu mmalite bụ ịrahụ ụra elu ma zụọ ala.
N'ikpeazụ, mgbe anyị na-ehi ụra na elu, mgbe anyị na-eku ume ikuku oxygenation, a na-amanye ahụ anyị imegharị site na ịmepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie karịa nke na-ebuzi oxygen na akwara anyị, nke bụ isi nke arụmọrụ ikuku. Ee ee, ị nwere ike ime otu mgbanwe ahụ site na nkasi obi nke ụlọ gị site na iji ime ụlọ hyperbaric ma ọ bụ ụlọ elu dị elu, ma enwere ọtụtụ nrụsi ike na ịga njem ebe ndị a dịpụrụ adịpụ. Nke a bụ n'ihi na ndị egwuregwu anaghị enwekarị ihe ndọpụ uche ka ha wee nwee ike lekwasị anya na ọrụ ha.
O siri ike na elu ugwu, ọ bụghị ya? - Ọ bụ ọsọ a - Ọzụzụ maka elu abụghị maka onye ọ bụla ma ọ ga - ewe obere oge iji mee ya, mana edepụtara ndị na - agba ịnyịnya dịka ịsị na ọ bụ ike ha na-adigide ruo 10%. Kedu nke nwere ike were afọ abụọ ma ọ bụ karịa iji mezuo. Agbanyeghị, ndị a bụ ndị na-aza okwu dị elu, n'adịghịkwa ka uru ahụike dị mma, ndị a anaghị adịru mgbe ebighị ebi.
Naanị ụbọchị 10 ruo 20 nke pụtara na achọrọ njem ọzọ njem ọzọ - N'agbanyeghị etu ị siri dị Ka onye na-agba ịnyịnya na-amu amu, ịrị ọsọ ọsọ ọsọ dị ka Tour de France pro bụ naanị ezighi ezi maka otu ihe kpatara ya. Ga-amalite isi.- Ee, ikuku na-agba ọsọ ọsọ nke ihe dị ka kilomita 20 kwa elekere na-enyere aka ịrịgo.
Ọ bụghị naanị na ọ na-enyere aka ọsọ, mana ọ na-enyekwa aka ịbawanye ọsọ na ịrịgo. Mgbe onye ọ bụla na-agba ọsọ, ọsọ na-agba ọsọ na onye na-agba gị n'azụ nwere ike ịnọ na wiil ahụ ogologo oge o kwere mee. - Ugbu a ị nwere ike ịnọ na-eche na onye ọ bụla nke na-anọdụ n’elu igwe kwụ otu ebe ga-erite uru na nke a.
Ma nke ahụ abụghị eziokwu. Ugwu na-ejikarị ihe akpọrọ ihe. Nke a pụtara na onye ọkwọ ụgbọ ala mbụ na-agbagharị site na eriri ahụ, na-eme ngwa ngwa na mmetụta a na-ewusi ike site na otu azụ.
Nke ahụ kwuru, mgbe onye na-agba nọmba 10 hapụrụ nkuku ahụ, ha ga-agba ọsọ iji jide wiil ahụ ma ọ bụ roba ga-adọka ma ha ga-ahapụ wiilị ahụ maka ndụ, rie nri ma lekọta ụzọ gị niile na nhazi gị, zuru oke banye n'ọsọ ahụ. Mana enwere ihe na - egbochi gị - nke ahụ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa gị! Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala bụ nanị mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ike ịhazi ikuku oxygen ma mepụta ike n'otu oge, niile ka ị na-arụ ọrụ karịa ndị ọzọ - ndị a bụ ngwugwu zuru oke.
I nwekwara ikike nke uche na ikike iji kwado ya. Ọ bụ naanị adịghị mma - Enwere m ike ịla ụlọ ugbu a, echere m. - Eeh. - N'agbanyeghị ihe ụlọ ọrụ mgbasa ozi ma ọ bụ ndị enyi gị na-a pubụ mmanya ga-ekwenye, ịgba ịnyịnya bụ n'ezie egwuregwu dị ọcha karịa ugbu a karịa ka ọ dị afọ 20 gara aga.
N'oge ahụ, ọsọ ha nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè ha ga-agba bụ n'eziokwu dị ịtụnanya - ihe kpatara nke a bụ naanị doping. Echere m na ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo dịka Tour de France pro afọ 20 gara aga, ị ga-enweta mmanya nke ihe na-akpali akpali na ndị na-eme ka ọbara si na Chopson gị, nke ahụ bụ ihe anyị doro anya na anyị anaghị akwado. Ihe omumu egosila na igaghi agbanwu inyinya ibu ka oso.
Yabụ, echere m na agaghị m igbu oge gị dị ka Tour de France pro. - Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a, nye ya nnukwu isi mkpịsị aka. Maka ntuziaka ndị ọzọ, pịa mara mma Orbea m.
Enwere ihe kpatara ị ji amasị ya Guzosie? - Mee ka m dị ogologo (James na-eze ume)
Taa, ndị egwuregwu a ma ama ga-eme naanịkpochaa uwe ogologo ọkpa hagaa n'ihu. Buru n’uche ihe na-eme mgbendị na-agba ịnyịnya ígwèamanye kakpochaa uwe ogologo ọkpa ha. Ndị ọkachamara na-asọ mpi ruo n'ókè na ahụ ha karịrị nrụgide - ọ na-adị ka ọ na-anwụ anwụ.Jul 21 2015 g.
Ndị ọkachamara na-ebi n’elu igwe kwụ otu ebe ma na-etinye ọtụtụ awa na ọtụtụ awa n’ime sadulu. Echere m, ha na-eme ihe dị egwu, m na-echekwa n'ezie. - N’ezie.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa nke a, - (gasps) st na-esi isi! - Ma obuna - (rie ude) Enwere m obi iru ala - Oh Chineke m - Iju. (Warning siren) - cesfọdụ agbụrụ dị ezigbo ogologo - San Remo, dịka ọmụmaatụ, ihe karịrị awa asaa, na mgbe ụfọdụ ihe niile ị chọrọ bụ pee! Ma eleghị anya, ị na-enwe obi ụtọ na a ga-enwe lull ma ị nwere ike ịkwụsị ma belata onwe gị. Ma ọtụtụ oge ị ga-achọpụta na ọsọ ahụ na-agba ọsọ n’eziokwu ma ịkwesịrị ịkwaga.
Cheregodi naanị otu nkeji. Agbanyeghị, echegbula onwe gị ịhapụ ịhapụ otu a. Ọ dị mma enyi enwere m gị - Ọfọn anyị nwere ike ịgaghị akwado ime nke a na ịgba ịnyịnya ọgbakọ gị, mana na agbụrụ ọ nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti mmeri ma ọ bụ ịla n'iyi.
Oh, achọrọ m nke ahụ! Ugbu a otu ihe pro ga-adị ezigbo mma na, na-agbanwe agbanwe oyi akwa nke uwe ha iji dabara ọnọdụ ha na-enwe. Anyị niile maara na ha mara ezigbo mma n'iwepụ ma wepụ akwa mmiri ozuzo! Ma ọ bụrụ na ị attentionaa ntị, ị ga-ahụ obere ahụ achọpụtara yana hoo haa na-akpali akpali karị n'okpuru-ọdịda anyanwụ anya - ị pụrụ ịhụ Sagan ka ya igwe kwụ otu ebe ala n'etiti a agbụrụ na-eche otú o si eme ya mgbe na-achịkwa nke igwe kwụ otu ebe na-anọgide na-enwe ọganihu nkà, karịsịa mgbe ị na-edozi njikwa aka, mana ndị ọkachamara na-edozi igwe kwụ otu ebe ha oge niile. Ọnọdụ kachasị dịkarịsịrị bụ ịdozi brekị, tụmadị ma ọ bụrụ na ịnwe igwe kwụ otu ebe nwere akara brek.
igwe kwụ otu ebe igwe kwụ otu ebe
Ihe kachasị njọ maka ọkachamara bụ na breeki gị na-ete n'ahụ rim ahụ. N'ihi ya, ịtọghe ndị na-emezi gbọmgbọm ahụ bụ nkà onye ọkachamara ga-enwerịrị ruo T. N'ezie, mmezi mgbatị rim, mgbe emechara n'akụkụ ụgbọ ala otu, ọ ga-abụ na ọ ga-enwe usoro kachasị dịkarịsịrị nke onye na-agba ịnyịnya ígwè - Na-ekwu maka idozi ihe m karama onu abịa rụrụ.
H have nwere ngwa ọrụ maka m? Ewoo! Ọma! - ulldọpụ ikpere m - ma ọ bụ ndị na-ekpo ọkụ ụkwụ na chios dị ka nka siri ike nghọta. Mana iji usoro ziri ezi, ọ nwere ike ime ya. Nke ahụ kwuru, uru ndị ahụ na-eme ka ọ dị mfe nghọta ma dịkwa egwu.
Na m pụtara, ọ siri ike na ndị na-ekpo ọkụ ụkwụ karịa ndị na-ekpo ọkụ ikpere, mana ọ bụ otu ị ga - esi mee ya. - (Dan) Nzọụkwụ 1: weta ikpere ikpere gị ruo nkwonkwo ụkwụ gị. Kwụ na Rolkwụ 2: Nyefee okpomoku gị n’ikpere ụkwụ gị nso nso ụkwụ gị.
Stepkwụ na Unkwụ 3: Kwụpụ akpụkpọ ụkwụ gị na sere n'elu gị cleat, na ị na-eme. Kwụpụ 4: ghaa azụ ma tinye ikpere ikpere gị n'akpa gị ma ọ dị na nke na-esote. Nakọta ihe oriri na ihe ọ drinkụ drinkụ si n'akụkụ ụzọ bụ nkà ọzọ dị ezigbo mkpa maka ọkachamara ma nwee ike bụrụ ihe dị oke mkpa, dị ka ya na copes nwere ọkara nke abụọ nke agbụrụ ahụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbụrụ niile nwere mpaghara nri mgbe ihe dị ka kilomita 90, dị ka nke a. Onye ọkwọ ụgbọ ala ga-eri obere karama mbụ na akụkụ ụfọdụ nke nri ya ebe ndị ọbịa na-adọba ụgbọala ma kesaa karama ndị ahụ. Ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọala chọrọ ijide karama ahụ, ọ na-egosi ndị otu ahụ na ọ chọrọ ịpụ, na-akwụsị n'akụkụ ụzọ, na-esetịpụ aka ya, na-ahụ onye ọka a nke yi uwe yiri ya wee jide karama ahụ.
Musettes na-adịkarị mfe nghọta, ebe ọ bụ na nri mpaghara na-adịkarị ebe agbụrụ ahụ dị ntakịrị - ịgbatị: nke a dị mfe ugbu a, mana ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ị nweghị, enweghị m okomoko nke ịme yoga. Yabụ nke ahụ bụ etu ị si agbatị na igwe kwụ otu ebe - (Chris) Yabụ kedu ka ha si eme ya? Ọ dị mma, mgbatị kachasị dị na quads gị. Wepu akpụkpọ ụkwụ gị ma gbanye ụkwụ gị mgbe ị dokwasịrị ụkwụ gị na sadulu gị.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị miri emi karị wee nọdụ ala n'ụkwụ gị. N'ebe ahụ ị nwere ya, ndị bara uru na-eme ụfọdụ ihe dị egwu .- Ma ọ bụrụ na ị bụghị ọkachamara ịgba ígwè, ikekwe ị gaghị anwale nke ọ bụla n'ime ha. - Ee e, nke ahụ bụ eziokwu. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a mgbe ahụ nye ya nnukwu mkpịsị aka. - Ma maka isiokwu ọzọ, lelee ya na, jụọ ndị ọkachamara.
Ndị na-agba ịnyịnya ga-edebe agba odo?
Ndị kasị mara amara bụacha odo odo, ma enwekwara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha na ntụpọ ntụpọjerseyọdịda ụbọchị ọ bụla. Ọtụtụ ndị na-eche na onye ọgba tum tum ahụ meriri n’ọsọ nke ụbọchị ahụ na-enweta mmeriacha odo odo, ma nke a bụ ihe ezighi ezi! Ha anaghịnwetakajerseynaanị iji merie otu ogbo.June 24. 2021
Enwere Tour de France 2020?
Tour de France 2020: 29th nke August ruo 20th nke Septemba.
Kedu ihe agba odo odo na Tour de France?
Maka ọtụtụ, agbụrụ ahụ gbasiri ikeacha odo odo, ma ọ bụ maillot jaune, na-anọchi anya ihe niile, dị ka ọ na-egosi onye na-agba ya nke na-eduga ná Nhazi General. Mgbe ọkwa ọ bụla gasịrị, ndị isi na-agbakọ onye nwere oge kachasị ọsọ n'ogologo agbụrụ niile.June 21. 2021
Tour na-eme njem njegharị Tour de France poop?
Do Tour de France agba ịnyịnya poop? - Quora. Ee, mana ọ bụghị n’etiti agbụrụ. Echere m na ọ bụrụ na ị jụọ onwe gị ugboro abụọ ị chọrọnsị, nyere ha ga-anọ naanị igwe kwụ otu ebe maka elekere 6-7 elekere anya n'ụbọchị kachasị ogologo, ha nwere ọtụtụ ogensịpụọ na igwe kwụ otu ebe.
Cycgba ígwè ọ dị mma maka abs?
Cygba ígwèarụ ọrụ dị iche iche na ahụ gị dị ala, gụnyere quads, glutes, hamstrings na hips, mana mgbe emere ya ike maka mmega ahụ,Ngalabana-na-na-aukwurụpụta. Ọzọkwa, obi gị - nke bụkwa mọzụlụ - na-enweta mgbatị obi dị egwu.23.08.2019
Kedu ihe kpatara ịgba ịnyịnya igwe ji eme m poop?
Imega ahụ na-enyere aka belata oge ọ na-ewe iji gafere eriri afọ, na-egbochi oke mmiri ịmịghachi n'ime ahụ gị ma hapụ.gịjiri oche ndị dị nro dị nro, nke dị mfe ịgafe, ”ka Dr. Ana Raimundo, bụ́ ọkà mmụta banyere eriri afọ nke Harley Street, na-akọwa.Mar 14 2011
Ogologo oge ole bụ Tour de France na kilomita?
Ogologo nke 2011 Tour de France na kilomita. Nke ahụ bụ ikuku iji tụnyere mbipụta kachasị ogologo nke agbụrụ ahụ - 5,745km na 1926 Ebe dị elu na mita nke Col du Galibier, ebe ọkwa 18 nke Njem nke afọ a ga-agwụ.
Ogologo oge ole bụ nke Tour de France?
Ogologo ha niile ga - abụ 58 kms, 27 kms n'etiti Changé na Laval Espace Mayenne na nke ise 5 na 31 kms n'etiti Libourne na Saint-Émilion maka oge nke 20. Obodo 10 ọhụụ ma ọ bụ saịtị saịtị ga-apụta na map nke 2021 Njegharị na ngụkọta nke 39:
Ndị na-agba ịnyịnya ole nọ na Tour de France?
Ọsọ ahụ nwere ìgwè ndị ọkachamara 20 na nke ọ bụla nwere ndị na-agba ịnyịnya itoolu. Ha ga-ekpuchi anya nke kilomita 3600 ma ọ bụ kilomita 2235. Ala dị ọtụtụ ugwu ma dịkwa larịị. Otutu uzo a choro ka ekpuchita bu France na ufodu mpaghara Belgium, Italy, Germany na Spain.